Xildhibaano rajo ka muujiyay isku keenista dhinaycada ku kala aragti duwan maamulka Koonfur Galbeed (Dhageyso) – Goobjoog News
Xildhibaano ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka Bay, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inay isku keenaan dhinacyada aragti ahaan isku haya siyaasadda guud ee Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Cabdulaahi Cabdi Garuun oo ka mid ah xildhibaanadan ayaa u sheegay Goobjoog Fm, isaga oo jooga magaalada Baydhaba in ay isku soo dhaweyn doonaan siyaasiinta aragtida kala duwan ka qaban maamulka Koonfur Galbeed.
Waxa uu sheegay in ay wanaagsan tahay in aan hadda lagu deg degin dhameystirka shirka Sedaxda gobal ee ka socda Baydhaba si looga war sugo maamulka Madoobe Nuunoow.
In la galo wada hadal ayuu sheegay inay tahay fursadda kaliya ee hadda furan, misane lagu heli karo maamulka Koonfur Galbeed oo loo wada dhan yahay.
Xildhibaanka ayaa dhanka kale sheegay in talo ahaan ay soo jeediyeen in shirka hadda socda Odayaasha ay si tartiib ah usii wataan, sidoo kalena lasii wado waan waan, sababtoo ah ayuu yiri, waxaa la qabaa rajo isku soo dhawaanshiyo ah.
Halkaan hoose ka dhageyso Wareysiga Xildhibaanka.
Dhageyso: Baahi Garsoor Oo Ka Jirta K/galbeed
Sawirro: Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxii Ka Dhacay X/weyne
Xeucgq grunqp cialis manufacturer coupon 2019 cost of cialis
Ssjdxg hpgagb Order viagra online buy cialis online safely
Hkeyhp wttcai viagra prices cost of cialis
Rjwpcs paicvf canadian pharmacy canadian online pharmacy
Ikxsid grbisk online canadian pharmacy Dfbmh
viagra for sale sildenafil pills sale viagra canada fast shi...
Reliable posts. Regards.. canadian pharmacy...
sildenafil without doctor prescription sildenafil generic...
payday loans direct lenders payday loans online fast deposit...